कांग्रेसकोे फाक्सिव र बुढिमोरङको जागरणअभियान सम्पन्न – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७६, ६ आश्विन सोमबार १३:५२
धनकुटा । संगठनलाई चुस्तदुरुस्त पार्न तथा वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरुको भण्डाफोर गर्न नेपाली कांग्रेसले जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणको सफलता पछि अहिले दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव विजयसन्तोषी राईले जानकारी दिए ।
अभियानको क्रममा साँगुरीगढीको बुढिमोरङमा स्थानीय तहस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जागरण अभियानका केन्द्रिय प्रतिनिधि तथा संविधानसभाका सभासद विश्वदीप लिङ्देनले जागरण अभियानले युवा तथा महिलाहरुमा नयाँ उत्साह र उर्जा मिलेको बताए । सो अवसरमा लिङ्देनले वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भले अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भैरहेको बताए । उनले सरकारको लोकतन्त्र विरोधी व्यवहारले संघीय लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएकोले सरकारलाई सचेत गराउन कांग्रेसले गाउँ गाउँमा जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला सभापति अग्नी प्रसाद पौडेलले जागरण अभियानले गाउँगाउँमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुमा नयाँ आशा जगाएको बताए । उनले यस अभियानले संगठन विस्तार हुने बताए । कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य अञ्जना ताम्लीले अभियानपछि पनि पार्टी त्रियाशील हुनु पर्ने बताईन । सो अवसरमा कांग्रेस जिल्ला सचिव विजयसन्तोषी राई, नेपाल महिला संघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य टिका भण्डारी, कांग्रेस जिल्ला सदस्यहरु विष्णु पौडेल, मानप्रसाद इङ्नाम, रमेश इवाहाङ, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष निरुपा राई, क्षेत्रीय सदस्य शुक्र लिम्बु, महिला संघ बुढिमोरङका सभापति ज्ञानु लिम्बुलगायतले जागरण अभियानले कांग्रेसलाई जनताको प्रिय पार्टी बनाउने बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस साँगुरीगढी वडा नं. ४ का सभापति राजेन्द्र इवाको अध्यक्षतमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य युवा नेता योगेन्द्र इवा लिम्बुले गरेका थिए । सो कार्यक्रमको संचालन युवा नेता आईत बहादुर इङ्नामले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा साँगुरीगढी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ४ का नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गरेको जनहितका लागि विकास निर्माणका कार्यमा रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । तर, जनविरोधी तथा अनियमितता गरेको पाईए भण्डाफोर गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कैदी बन्दीहरुको आँखा जाँच